चिसो मौसममा ओठ फु’टेर दि’क्क हुनुहुन्छ ? घरमा बनेको यी उपाय अपनाउनुहोस् पाउनुहुनेछ सजिलै छु’टकारा – Jagaran Nepal
चिसो मौसममा ओठ फु’टेर दि’क्क हुनुहुन्छ ? घरमा बनेको यी उपाय अपनाउनुहोस् पाउनुहुनेछ सजिलै छु’टकारा
काठमाडौँ । सामान्यतयाः जाडोको मौसम सुरु भएसँगै ओठ फु’ट्ने स’मस्या पनि शुरु हुन्छ ।जाडोको समयमा हावा सुख्खा हुने र यसको स्प’र्श छालामा पर्दा छाला पनि सुख्खा हुने गर्छ ।जाडोको समयमा सुख्खा हावा बाहेक अन्य कारण पनि ओठ फु’ट्ने स’मस्या आउँछ ।अन्य के कारणले ओठ फु’ट्छ भनेर सामान्यतयाः कम मात्र मानिसहरुलाई थाहा हुने गर्छ ।
१. ओठमा बारम्बार जिब्रो लगाउँदा: केही मानिसहरुको बारम्बार जिब्रो ओठमा द’ल्ने बानी हुन्छ । जिब्रोमा भएको र्या’ल बारम्बार ओठमा द’ल्दा ओठ झन् सुख्खा हुन्छ ।
थुकमा केही यस्ता एन्जाइम्स हुन्छन् जसले भोजन प’चाउने काम गर्छ । त्यस्तो थु’क ओठमा लगाउँदा ओठमाथिको प’र्त ए’न्जाइम्सका कारण सु’क्न थाल्छ र ओठ झन् धेरै फु’ट्छ ।२.डिहाइड्रेशन:ओठ फु’ट्ने अर्को ठूलो कारण भने डि’हाइड्रेसन हो ।डि’हाइड्रेसन अर्थात शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनु । पानी हाम्रो शरीरका लागि अत्यावश्यक पदार्थ हो। प्या’स नलागेसम्म पानी न’पिउँदा यस्तो स’मस्या देखापर्छ । मानव शरीरलाई दैनिक २ देखि ३ लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले थोरै समयको अन्तरालमा पानी पिइरहनुपर्छ ।डि’हाइड्रेशनको स’मस्यामा ओ’ठ धेरै फु’ट्ने गर्छ । साथै, अन्य स्वास्थ्य स’मस्यामा समेत अ‍ोठ फु’ट्न सक्छ ।
३.अमिलो खानेकुरा: अ’त्यधिक अमिलो खानेकुरा खाँदा पनि ओठ फु’ट्ने स’मस्या आउँछ । यसको धेरै से’वनले मा’उथ ड्रा’इनेस र ओठ फु’ट्ने स’मस्या हुनसक्छ । भिटामिन सीले छालामा च’मक ल्याउने र उमेरभन्दा कम बुढो देखाउन मद्दत गरेता पनि यस्ता खानेकुरामा हुने ए’सिडिक ने’चरका कारण छालालाई धेरै सु’ख्खा बनाउने हँुदा ओठ फु’ट्न सक्छ । त्यसैले अमिलो खाँदा पानी ज्या’दा पिउने गर्नुपर्छ ।४.धेरै म’द्यपान: कहिले काँही म’दिराको धेरै से’वन गर्दा पनि ओठ फु’ट्ने स’मस्या आउँछ ।अ’ल्कोहलले डि’हाइड्रेसन गराउने हुँदा ओठ फु’ट्न सक्छ ।
ओठ धेरै नै को’मल हुन्छ । त्यसैले बोल्दा, बा’तचित गर्दा शरीर भित्रको हावाको स’म्पर्कमा ल’गातार आउँछ र ओठमो न’रमपनामा कमी आउँछ । यस्तो यदि तपार्ईं म’द्यपान धेरै पि’उने गर्नुहुन्छ भने तपाईंको ओठ फु’ट्ने स’मस्या आउँछ ।५.चे’लाइटिस: ओठ फु’ट्ने स’मस्या छालाका लागि एक विशेष स’मस्याको रुपमा लिइन्छ । जसलाई चे’लाइटिस भनिन्छ । चे’लाइटिसको स’मस्यामा मुख, कानहरु र ओठ फु’ट्ने गर्छ । र यस्ता अं’गबाट र’गत समेत आउँछ । यस्ता स’मस्यालाई बे’वास्ता गर्दा इ’न्फेक्शन समेत हुने गर्छ ।
स’माधान:हावामा बाहिर निस्कनुभन्दा अगाडि कुनै तै’लीय पदार्थ ओ’ठमा द’ल्ने र केहि छिनपछि सुतीको क’पडाले ह’ल्का पु’छेर नि’स्केमा केहि र’क्षा हुनसक्छ। राती सु’त्दा विशेष गरी ग्लि’सरीनमा कागती र गु’लाबजल हा’लेर ओठ, गाला, हात र खुट्टामा द’ल्नाले फु’ट्ने प्रक्रिया कम हुन्छ । सुत्ने बेलामा घरमै पाइने घिउ, मखन, दूधको तर आदि हलुका तरीकाले ओठमा द’ल्नाले फाइदा पुग्छ । शरीरमा पानीको मात्रामा कमी हुँदा ओठ, गाला, हात, खुट्टा फु’ट्न सक्छन् । त्यसैले गर्मी र जाडो दुवै मौसममा पानी पर्याप्त पिउनुपर्छ ।
ओठ फु’ट्ने धेरैजसो व्यक्तिहरू बारम्बार जिब्रोले ओठ चा’ट्छन् । यसो गर्दा केहि सञ्चो भएजस्तो लाग्छ, तर थु’क सु’केपछि पहिलेको भन्दा झन् सु’ख्खा हुन्छ । बारम्बार ओठ चा’टिरहँदा ओठको छाला वरिपरि का’लो हुनजान्छ ।जाडोमा दैनिक बदाम र सुन्तलाको से’वन गर्दा पनि यसबाट ब’च्न सकिन्छ । बाहिरी वातावरणमा जाँदा लि’पगार्ड, लि’पिस्टिक लगाउँदा पनि ओठ फु’ट्नबाट ब’च्न सकिन्छ ।